Khabiirka Kala Duwan: Maxay Thunderbird Dareemaan My Email sida Spam?
Waxaa jira cashar qiimo leh oo Mozilla bartay ka dib markii ay u direen wargeysyada bil kasta macaamiishooda. Maqaalka soo socda ayaa jeclaan lahaa in la wadaago natiijadan. Inta badan dadka isticmaala email macmiil Thunderbird oo ka socda Mozilla ayaa warkooda ku soo qoray wargayska oo leh feejignaan. Feejignaanku wuxuu akhriyay in Thunderbird u maleeyay fariinta loo diray fariin email ah
Ivan Konovalov, oo ah Maamulaha Guud ee Macaamiisha Maamulaha Guusha Macaamiisha, ayaa sheegay in runta arrintu ay tahay in shirkaddu aysan ku talagalin inay ku dhacdo qof kasta oo isticmaalaya qadarkooda bil kasta iyo talooyinkooda bogga internetka, oo ay u dir dadka isticmaala isticmaalkooda emails. Waxay u horseeday inay is waydiiyaan wixii ay sameeyeen.
Ka dib markii la qiimeeyo dhibaatada iyo samaynta dhowr marxaladood, waxay ogaadeen in nidaamku uu si toos ah u keeno feejignaanta markasta oo uu ka helo URL nuqulka HTML ee emailka. Arrintan isku mid ayaa saameyneysa barnaamijyada kale sida Outlook iyo Entourage email. Waxaa jiray cabashooyin la mid ah arinta hadda jirta ee Thunderbird waayo-aragnimadooda macaamiishooda.
Dhibaatada Thunderbird ee digniinta emailka waxay ahayd sababtoo ah waxay ku dari jireen khadka suuq-galinta fariintooda. Waxay geliyeen qoraal ku saabsan Xiriirka Duur-joogta Qaranka. Ujeedadu waxay ahayd in la helo taageero ballaaran oo loogu talagalay ururka, ilaalinta duur-joogta iyo degaanadooda. Dhamaadka qoraalka, wuxuu ahaa URL ah website-kooda oo loogu talagalay qof kasta oo doonaya inuu ku deeqo sababtooda
Mozilla ayaa si fiican u jaanqusey isku-xidhka qoraalka si loo akhriyo isla sidaas laakiin laga saaray qeybta cinwaanka. Halkii aad waydiisan lahayd dadka in ay ku deeqaan website-ka gaarka ah ee kor ku xusan, waxay waydiisteen qof kasta oo diyaar u ah inuu deeq u bixiyo maanta. Ka dib markii ay tani dhacdo, bulshada Thunderbird way dejisay. Waxay ahayd arrin waxtar u leh shirkadda. Sidoo kale waa wax aanay ahayn in aysan ku celin.
Hab kale oo ay uga hortagi karaan dhibaatada ka imaaneysa dib u soo celinta waa inay ku xidhaan xiriirka iyadoo la adeegsanayo kordhinta cm_dontconvertlink. Xayeysiinta qaylo-dhaanta waxay shaqeynayaan adoo isku dayaya in ay u dhigmaan URL-ka ku jira jirka, si uu u isku dayo inuu isku xiro. Haddii aysan ku haboonayn, habka digniinta ayaa uula dhaqmaa sida isku-dayga phishing, sidaas darteedna wuxuu soo saaraa ogaysiisyadaas. Marka lagu daro kordhinta kor ku xusan ee isku xiran waxay ogeysiisaa barnaamijka aan raadinaynin xiriirka ama u sahlanayn. Marka la soo gaabiyo, waxay kaliya ka baxayaan keligood. Sidaa awgeed, kala duwanaansho sida kan la aqoonsaday e-mail Thunderbird mar kale ma kicin.
Halista kaliya ee xalka ayaa ah in fure kasta oo ku xiran xiriirada emailka uusan ka muuqan dadaalka ololaha. Sidoo kale ma muujin doonaan warbixinta falanqaynta
Anshaxa sheekada, oo ka socda Thunderbird kiiskiisa, waa dadka, ganacsiyada, ama shirkadaha aysan ku darin emails nuqul kasta oo email ah oo ay rabaan inay diraan. Haddii ay tahay waajib ah inay sidaas sameeyaan, waa inay soo daayaan raadinta URL-ka. Haddii kale, Thunderbird waxay qaadi doontaa tallaabo isla markaana waxay u daaweyneysaa emailka sida spam Source .